Abwaan Hadraawi: ‘RAG SIYAASI WADA NOQOY’
maxamedsheekafguun Janaayo 15, 2020 suugaanta
Maansadan waxa lagu tiriyaa tixaha ugu muhiimsan maansooyinka danbe ee Hadraawi. Waxa ay maansadu ka hadlaysaa arrin muhiim ah oo ka soo jeedda baahi i taabo leh, si muuqatana uga dhex aloosan bulshadeenna
maanta, waana ammuurta ku saabsan kaalinta ragga, gaar ahaan aabbaha ee ku waajahan waajib gudashada iyo xil-dhismeedkii qoyska iyo bulshada.
Maansadu waxa ay tilmaamaysaa in kaalintani maqan tahay oo raggii ka gaabiyey ama kaba baaqdayba! Abwaanku waxa uu sharxayaa kaalintaasi ragga ee maqan, waxanu iftiiminayaa in noloshu ay ku dhisan tahay laba tiir oo isku dhidban, isna kaaba, waana ragga iyo dumarka. Si haddaba ay noloshu u jirto, macnena u samayso waxa loo baahday in labadu (ninka iyo afadu) ay kala yeeshaan xilal iyo waajib-gudashooyin kala cayiman, kala muuqda oo kala magacaaban, kuwaasoo iyana u baahan isla qabasho, is-buuxin, is-kaabid iyo qofba tiisa oo uu ka soo dhalaalo inta uu karaankiisu gaadhi karo hagrasho la’aan.
Maxamed Ibraahim (Hadraawi) oo taas sii amba-qaadaya: ‘Kaalintaasi ragga ee maanta maqani waa hoggaamintii, horseedkii, qorshayntii, maamulkii, maarayntii, jaangooyadii, abaabulkii, sahankii, tusmadii iyo taladii’. Hadraawi ma tilmaamayo maqnaanta kaalintaas oo keliya, wuxuuse beyaaminayaa eelka iyo ibtilada ka dhashay ee maqnaantu keentay, taas oo ay ugu weyn tahay (buu yidhi) indha-beel ku yuurursada oo haleela dumarkii iyo ubadkii. Sida arrintani ay u saamaynayso qaab-dhismeedka qoyska iyo guud ahaan bulshada iyo sababta ay kaalintii raggu u maqan tahayba, waxa si wanaagsan u sii saafaya, lagana sii bogan karaa marka la sii guda galo maansandan Rag Siyaasi Wada Noqoy iyo maansada kale ee ka sii danbaysa (Anuunbaa Hooyadaa ah).
Rag Siyaasi wada Noqoy waxa ay soo baxday 14/03/1998, waxana tuduca ugu horreeyaa uu ka tibaax-bixinayaa in gabayga, maansada iyo suugaanta laga qoro, lagana soo dheegto dadka waayihiisa, noloshiisa, waxa dhibaatooyin haysta, sida looga bixi karo (xalka), halka loo jihaynayo, waxa la farayo iyo xaqiiqooyinka dadka dhex yaalla, waxa fool xumo ka dhex ilma-roganaysa, sawirka foosha xun ee ku arooraya iimaha iyo goldaloolada qofka iyo runnimadiisa faraqa u sudhan iwm. Marka gabayga la sameeyo ayaa dib loogu celiyaa halkaasi laga sameeyey oo la tusaa, lana daawadsiiyaa xaqiiqadiisii, isaga oo qofku iska dhex arkaya maansada lafteeda sida muraayadda xumo iyo samo hadba kuu ku sugan yahay. Waxa ay maansadu tidhi:
Surraddiyo murtida culus
Hadallada saddexa maran
Halka laga sameeyaa
Marba lagu salaamaa.
Majaray ku socotaa
Xumo lagaga saahido
Subax noolba waa guul’
Lagu helo sax iyo maan,
Qofka xiga samaantay
Agihiisa sudhan tahay,
Ma oggola suldaamayn
Iyo been ku-sabashada.
Sababaha ka dhacayaa
Nafta lagu sar gooyaa,
Marba kii sokeeyaa
Runta lagula seexdaa,
Siraheeda culus buu
U su’aalo-badan yahay,
Marba saab ka-bixintaa
Hanku ugu sid tiriyaa,
Sugiddaa leh maahmaah
Iyo sawrac gobannimo,
Hiyigaa leh saadaal
Iyo saami lagu qado
Marba sadadu waa meel,
Marna qaybtu waa sarar.
Inaan suuska digashada
Iyo saaqa lahashada
Nafta seylad loo geyn
Faral iyo Sunnaa dhigay,
Marka saacu gudhan yahay
Waxa seeto laga dhigay
Dadku inay ku soomaan
Xilka sebenku leeyahay
Iyo weedh-dha saalloon,
Sacab madhanba loo hay
Sadarrada hal-hayska ah.
Qof saluuga mooyee
Hadda Cadaygu waa soor’
Sirtu waa ka-dhigashada
Marka aan si kale jirin.
Senge orod la-daba galo
Saryankuu u neceb yahay,
Codka selelka bayrtiyo
Dadna boog sac-sacanoo
Sirqo ba’an ku noqotoo
Marba suuf ku dedayuu
Sawirkeeda neceb yahay.
Rag siyaasi wada-noqoy
Sarrif-hadal ku daal daal,
Xil sariirta keligeed,
Surin kugu bannaanaa.
Aqallada ximraa sudhan
Sigashay ku beridaa,
Dadku solanka maantii
Sahwi buu ku joogaa,
Sardhaduu ku lulan yahay,
Surmi bay ku huruddaa
Ama ciil la-kala socoy
Ama cadho la-kala soof.
Dhasha saxanku hayn waa
Surbacaadka raac raac
Lagu qaad far iyo suul,
Mar Salaadda jiidh jiidh
Marna umalka seeraar
Tu sawaaban yeel yeel
Dadku segeger mood mood
Sunbo loogu yeedh yeedh,
Nin wax saaray maahee
Xogta garashadaan solin,
Sumad baanay weli hayn
Cidna lagula saayiro.
Mar hadday sirgacan tahay
Dadku saan-gab wada yahay
Sannadaha ku kala-weyn
Lixdan iyo sagaalkood
Kuma kala sarreeyaan.
Kulammada sawaxanka leh
Suti muranka yaalliyo
Suruc buu dugsanayaa,
Derejaan la-kala sidan
Kala soocda laba ruux
Haki, iyo sug baan jirin.
Dhulka suur ku yeedh yeedh
Bulsho loo sanqadha-badi
Sac sac raaca loo diid
Sakaraad la-wada noqoy.
Dhaqan lagu sarriigtiyo
Saranseer ka daba yimi,
Dadku wada sal fududaa
Iyo saarka tumashada,
Sunta qoosh la-kala dhaxal.
Sahan iyo baxnaaniyo
Noloshuba sansaan ma leh
Ma dhex yaal sureerkii.
Haddaan soohdin kale jirin
Waxaan suura-geli karin
Dadku inuu si-dalagtiyo
Afka suuq ku kala-baxo.
Seko weeye garashadu
Lagu saanto xigatada,
Noloshana sal iyo baar
Waxa loogu siman yahay
Waa siraad ka-dhigashada
Hadba tii Ku-seegtoo
Waxa laysu siiyaa
Salka lagu fadhiistiyo
Yaanu seesku dheelliyin.
Hadday saan-cad dunidii
Adoo sayn cad kugu tahay
Saymaheedu meel buu
ILaa saaka kuu yiil.
Haddaan sooryo waayeel
San-ku-neefle kuu hayn
Cid baan saaf la-dheegtiyo
Xadhig soohan Kaa hayn,
Haddii duul Ku-sahashado
Ama sebi xaq kugu luro
Sed ka maqan tirsanayaa
Waa saruurad haysee
Selel yaaney kugu ridin.
Q-4aad sheekada Hir-jacayl
Q-5aad sheekada Hir-jacayl